Qalabka gaaska ku ing Bixiyeyaasha biyo-la'aanta dhululubada ah
Kusoo kordhaya shirkadaha xafiisyada, xafiisyadaiyo xitaa gudaha guryo gaar u muuqan Biyo daadashada. Casri ah aaladda loogu talagalay biyo macaan waxay siisaa biyo qabow oo macaan, kulul iyo heerkulka qolka oo la cabbo, iyadoo ku xiran nooca qalabka la soo xulay iyo baahida dadka isticmaalaya.
Qalabka biyaha kaarboonta ah Waa mid ku habboon meelaha furan, goobaha shaqada ee xiran iyo hay'adaha dadweynaha, iyo sidoo kale guryaha gaarka loo leeyahay, yacni meel kasta oo biyo tayo sare leh ay muhiim u tahay.
Soo saarayaasha biyo-cabeyaasha laga heli karo suuqa ayaa ku dadaalaya inay gaaraan heerka ugu sarreeya ee tayada iyo dhadhanka biyaha la diyaariyey iyagoo adeegsanaya xalal farsamo oo casri ah. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale daryeelaan naqshada casriga ah ee qalabka ku habboon qol kasta. Faa'iidada dheeraadka ah ee qalabka halkan lagu soo bandhigay biyo carbonated sidoo kale waa shaqadooda sare.
Iyada oo ku xidhan baahiyahaaga, waxaan ka dooran karnaa dhowr aalad oo heer sare ah diyaarinta biyo dhalaalaya:
Bixiyeha biiyaha-biiyaha-biiyaha-birta ah
Bixiyeha biiyaha-biiyaha-biiyaha-birta ah ayaa loo qaabeeyey oo loogu talo galay in loogu isticmaalo gudaha noocyo kala duwan, halkaas oo aysan ahayn oo keliya qalab shaqeynaya, laakiin sidoo kale qurxinaysa booska la dhigay.
Xalalka ugu casrisan ee farsamada ee loo adeegsaday nashqadeynta iyo soo saarida aaladan iyo adeegsiga qalabka ugu tayada sareeya soo saarkeeda waxay damaanad qaadeysaa howlgalka lagu kalsoonaan karo ee qeybiye iyo waxtarkiisa ugu badan.
Bixiyaha Hi-Class wuxuu diyaarin karaa ilaa 45 litir oo biyo qabow iyo dhalaalaya saacaddiiba iyo illaa 13 litir saacaddii biyo kulul.
Mashiinka ayaa bixiya afar nooc oo biyo macaan ah.
Biyaha la diyaariyey waxay noqon karaan qabow, kulul ama heerkulka qolka, sidoo kale kaarboon ayaa laga dhigi karaa.
Biyo dhadhan fiican leh oo caafimaad leh oo ay diyaarisay qalabka Hi-Class ayaa si toos ah loogu dhex shubi karaa weelasha dhererka kala duwan. Tani waa suurtagal in lagu mahadiyo rakibida tuubada la isku hagaajin karo ee qalabka.
Isku darka muraayadda madow ee muraayadda hore ee qalabka oo leh birta birta ah iyo guddi koontaroolidda bilicsanaanta oo aad u qurux badan ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto naqshad casri ah oo ku habboon gudaha gudaha, isla mar ahaantaana la socota gacan ku haynta aaladda sare ee aaladda.
Biyo-dhaliye biyo-la'aan ah oo Pro-Stream ah
Biyo-dhaliye biyo-la'aan ah oo Pro-Stream ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku diyaariso biyo qabow, kulul iyo kaarboon waqti gaaban, oo lagu garto dhadhan fiican.
Qaybiyaha Pro-Stream waxaa lagu gartaa naqshad casri ah iyo shaqeyn heer sare ah, waxaana mahad u ah tiir kuleylka kuleylka leh iyo guddi xakameyn taabasho ah, qeybiyaha ayaa ah mid aad u fudud in la isticmaalo. Isticmaalaha ayaa si cad loogu wargaliyay xaaladda hawlgalka qalabka mahadnaqa fariimaha lasoo bandhigay.
Qalabka-Pro-Streamer wuxuu ku shaqeyn karaa kuleyliye, qaboojiye ama nidaamka gaaska. Thanks to nidaamka xakameynaya habka hawlgalka qalabka, waxaa suurtagal ah in si toos ah loo yareeyo isticmaalka tamarta.
Biyaha waa la kululayn karaa ilaa 98 ° C halkaniyo waxtarka qalabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad buuxiso illaa 215 koob oo qaadi kara 250 ml saacaddii. Faa'iidada qalab-bixiyahan ayaa markaa awood u leh inuu si dhakhso leh u diyaariyo dhammaan cabitaannada kulul.
Ikhtiyaarka ah in la diyaariyo biyo qabow oo dhalaalaya ayaa bixiya illaa 15 litir oo biyo ah saacaddiiba.
Bixiyeyaasha biyaha J-Class
Bixiyeyaasha biyaha J-Class waxaa lagu gartaa tayada ugu sareysa ee la helo iyadoo loo mahadcelinayo isticmaalka tikniyoolajiyadda casriga ah, taas oo hubineysa hawlgal la isku halleyn karo iyo adeegsi badan oo qalabka ah
Qalabyahanadan ayaa si xamaasad leh loogu adeegsadaa xafiisyada, baararka, makhaayadahaiyo sidoo kale guryaha gaarka loo leeyahay. Waxaa lagu soo saaray laba nooc:
- Kala duwanaanta TOP - qalab loogu talagalay in lagu dhejiyo dusha miiska
- xulashada IN - in lagu rakibo hoosta miiska dushiisa.
Mashiinka wuxuu diyaariyaa afar nooc oo biyo ah:
kulul oo leh heerkul gaaraya 98 ° C
Qalabka-J-Class wuxuu leeyahay laba awood: 30 litir oo biyo diyaarsan saacaddii iyo 45 litir oo biyo ah saacaddii.
Niagara Top-ka dhululubo-biyoodka-bilaashka ah
Niagara Top-ka biyo-silsilad-la'aanta ah waa qalab aad u adkeysi badan, hufan oo la isku halleyn karo oo diyaarinaya biyo macaan oo dhadhan fiican leh, oo buuxinaya heerarka ugu sarreeya, oo si guul leh loogu isticmaali karo xafiisyada, goobaha shaqada iyo xafiisyada.
A Niagara Top Distributor ayaa kaa caawin doona inaad xalliso wixii khuseeya saadka ee la xiriira gaarsiinta biyaha dhalada iyo keydinta, iyo keydinta dhalooyinka caagga ah. Thanks to aaladdan xirfadeed, waxaa suurtagal ah in shaqaalaha iyo macaamiisha la siiyo biyo macaan oo caafimaad qaba, iyada oo aan si joogto ah ugu habboonayn biyaha dhalooyinka lagu shubo.
Qalab-qeybiyahaan waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo dhammaan goobaha dadweynaha, hubinta hawlgal aan dhib lahayn markii la qaybinayo xitaa qaddar badan oo dhalaalaya iyo weli biyo, kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u buuxiso dhammaan noocyada maraakiibta iyo yaraynta kharashka bixinta iyo kaydinta biyaha la cabbo.
Moodooyinka la heli karo:
-TOP - miiska dushiisa
-IN - miiska lagaa soo iibsado
MAR KARO SOO SAARIDDA biyo-xooriyaha biiyaha-ka-bilaashka ah
Mashiinka Biyo-la’aanta Biyo-la’aanta ah ee Cabbitaanka TOWER waa aaladda ugu fiican ee loogu talagalay diyaarinta xaddi badan oo biyo qabow oo caafimaad qaba oo dhadhan fiican leh, labadaba wali iyo dhalaalaya. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay qaybta cuntada, baararka, makhaayadaha iyo hudheelada, yacni meel kasta oo ay lagama maarmaan u tahay in lagu diyaariyo qaddar aad u tiro badan oo biyo cabbitaan tayo sare leh leh muddo gaaban.
Qalabkan waxaa lagu dari karaa nidaam kasta oo ka hooseeya miiska.
Qaybiyaha 'DHEERAADKA' TOWER wuxuu ka samaysan yahay qalab tayo sare leh, hubinta hawlgal dheer oo aan dhib lahayn. Naqshadeedu waxay u oggolaaneysaa ururinta nadaafadda nadaafadda biyaha la cabbo ee la diyaariyey.
Mashiinka H2O ee bilaa dhululubada ah waa qalab casri ah oo loogu talagalay diyaarinta qabow iyo dhadhan fiican, biyo cabitaan kulul iyo kaarboon, iyo sidoo kale biyo heerkulka qolka. Qiyaasaha isafgaradka, qaabeynta casriga ah iyo howlgalka dareenka leh ayaa ah faa'iidooyinka qalabkan, oo lagu heli karo laba nooc:
- miiska dushiisa - TOP
- miiska hoostiisa oo leh tufaax - IN.
9 lBixiyeyaasha biyaha-aan lahayn dhululuboqalabka gaasaska biyaha lagu shuboBixiyeyaasha biyaha gurigaBixiyeyaasha biyaha5l qalabka biyahabiyo-siiyaha biyo-biyoQiimaha qaybiyaha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee carruurtaBixiyeyaasha biyaha iftiinka lehBiyo-siiyaha Warsawqalabka biyaha kululBixiyeyaasha biyaha5l Bixiyeyaasha biyahaQalabka biyaha ee AllegroBixiyeyaasha biyaha ee dhaladaQiimaha Bixiyeyaasha BiyahaBixiyeyaasha biyaha hadiyadda dabiiciga ahdabeecadda qiimaha qaybiyaha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee carruurtabiyo-siiyaha xafiiskaBixiyeyaasha biyaha gurigaQiimaha Biiyaha biyaha gurigaBiyo-cabista biyahaeden Bixiyeyaasha biyahaBuug-gacmeedka biyo-siiyaha edenBixiyeyaasha kaarboon-gaaska lehQiimaha qaybiyaha biyaha dhalaalayaBixiyeyaasha kaarboon-gaaska leh ee gurigaBiyo-wade ayaa Bixinaysa sida ay u shaqeysobiyo-siiyaha KrakowBixiyeyaasha biyaha macdantabiyo-bixiyaha oasisolx biyo-bixiyeBiyo-cabista biyahabiyo qaybiyaha oo af ingiriisi ahbiyo-siiyaha duufaankaBiyo-qabeyaha qaboojiyahaBiyo kululeeyaha qaboojiyaha sida ay u shaqeysoBiyo-siiyaha Warsawbiyo-qaybiyaha wrocławcabirka biyo-qaybiyahaBixiyeyaasha biyaha kirada ahbiyaha kirada bixiyaha ahKoronto Bixiyetuubada biyaha tuurabiyo-qabeyaha qaboojiyahabiyo qaybiyaha shabakaddaBixiyeyaasha biyahabiyo-bixiyeyaasha shirkadahaqalabka biyaha macdantaqeybiyeyaasha biyaha gugaHal Bixiye BiyoBixiyeyaasha biyaha qaboojiyahabamka biyaha 5 dhalo gallon qaybiyaha 18qalab lagu sifeeyo laguna nadiifiyo biyahaaaladda loogu talagalay biyo macaanqalabka gaaska gaaska biyaha ku shaqeeyaqalabka gaaska gaaska